April 2017 - Page 4 of 12 - Sawirrotv
Madaxweyne Farmaajo oo Digniin u diray Ciidamada Amisom (Dhafayso)
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu markii u horeysay ka hadlay tacadiyada ciidamada Midowga Afrika ee Amisom ay ka gaystaan Magaalada Muqdisho, sidoo kalena ay u gaystaan dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku tilmaamay arin aanan la aqbali karin tacadiyada bareerka ah oo qaar kamid ah ciidamada Amisom ay ka gaystaan …
Madaxweyne Farmaajo oo Maanta ku Wajahan Magaalada Baydhabo
Madaxweynaha Soomaaliya mudane, Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta oo axad ah ku wajahan magaalada Baydhabo oo ah xarunta KMG ee maamulka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Soomaaliya iyo wefdi uu hogaaminayo ayaa lagu wadaa inay maanta ka amba baxaan Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, waxaana la fillayaa inay maanta barqadii ka degaan Garoonka Shaati Gaduud ee …
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Maanta Booqasho Gaaban ku Tegay Degmeda Dayniile (SAWIRRO)
Ra’iisul Wasaaraha dowladda Federaalka ee Soomaaliya mudane, Xasan Cali KHayre ayaa maanta booqasho gaaban ku tegay Degmada Dayniile ee gobolka Banaadir, isaga oo u kuurgalayay xaaladaha amniga iyo arrimaha bulshada ee degmadaasi ka jira. Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa warbixino ka dhegaystay masuuliyiinta iyo dadweynaha ku nool degmadaasi, Booqashadan uu Ra’iisul Wasaaruhu mannta ku tegay halkaasi …
Haweeneydii Dheemanka Lagu Qabtay (VIDEO)
Haweeneydan oo u soo labisatay sida qof maalqabeen ah ayaa soo raacday gaari taxi ah oo banaanka dukaanka ku sugayay. Fatima ayaa waxaa qorshaheedu waxa uu ahaa inay baako eber ah oo gurigeeda ay ku soo suubisay inay ugu bedesho tii dheemanka uu ku jiray, sidaasina ay ku baxsato.
Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida oo Maanta Dil Toogasho ah ku Fulisay Askari Dilay qof Shacab ah (SAWIRRO)
Maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa saaka xukun dil toogasho ah ku fulisay askari ka tirsanaa ciidamada Booliska Soomaaliya, kaasi oo horay u dilay qof shacab ah oo aan waxba galabsan. Askariga maanta la toogtay ayaa lagu magacaabi jiray Axmed Cabdi Maadey kaaso oo ay da’diisu ahayd 28 sano jir, isla markaana ka tirsanaa ciidanka Booliska …
Dowladda Federaalka ayaa uga mahadcelisay Dowladda iyo Shacabka dalka Isutaga Imaaraadka Carabta (UAE) maanta oo Jimco ah u iclaamiyey maalinta gurmadka abaaraha dalka Soomaaliya oo dhammaan TV-yada dalkaasi Imaaraadka ay si toos ah (live) ugu ololeyn doonaan in lacago loo uruuriyo dadka Abaarta ay ku habsatay. Wasiirka Warfaafinta ee dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane, Cabdiraxmaan Cumar …